News Collection: १३ बर्षीय केटीले यसरी फसाइदिइन शिक्षकलाई
१३ बर्षीय केटीले यसरी फसाइदिइन शिक्षकलाई
१४ बैशाख, बिराटनगर । गर्भ वोकेकी कुनै महिलाले ‘यसैले मलाई जवर्जस्ती करणी गरेको हो’ भनेपछि त्यो पुरुष पक्राउ पर्छ ।
महिला अधिकारको वकालत गर्ने एनजिओहरुलाई पनि कामको अभाव छ, जसले महिलालाई पिडीत भन्दै न्ययका लागि पैरवी गरिहाल्छन् । हुलमुल र जोडबलकावीच त्यो पुरुष निरिह बन्छ र जेलको चिसो छिडीमा जान्छ ।
दश महिना जेलको हावा खाएपछि त्यही पुरुषलाई बिज्ञानले निर्दोष सावित गरिदिए के होला ? झुटा आरोप लगाएर कसैको नैतिक जीवन समाप्त पार्ने र समाजमा कलंक सावित गराउने ती महिलालाई कारवाही होला ?
बिराटनगरमा हालै यस्तै भएको छ । तर महिला अधिकारको पक्षमा पैरवी ती संस्थाले पुरुषलाई फसाउने यस्ती महिलालाई कारवाही गराउने कुरै सुन्न सक्दैनन् ।
मोरङको रंगेली २ स्थित एक निजी बिद्यालयमा कार्यरत एक शिक्षक महेशकुमार साह आफ्नै १३ बषिर्या छात्राबाट फसाइएकी छन् । उनको गर्भ ५ महिनाको भएपछि सोधीखोजी भयो । छात्राले साहले जबर्जस्ती करणी गरेको बयान दिइन् । साहले अभियोग अस्वीकार गरे, उनका गाउँलेले पनि त्यो स्वीकार्न सकेनन् । तर महिला अधिकारको पक्षमा लविङ गरिरहेकाहरुले कहाँ त्यसै छाड्थे र ?
किशोरीले स्कुलको प्रार्थना समयमा पानी पिउन गएका बेला साहले आफुलाई जवर्जस्ती करणी गरेको बयान दिइन् । शिक्षक साहले आरोप स्वीकारेनन- र भने मेरो डिएनए परिक्षण गरियोस् ।
न्यायाधीश मेघनाथ भट्टराईको इजलासले आरोपी शाहलाई अबस्था हेरी थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिए । मंसिरमा छात्राले छोरो जन्माइन, साहकै अनुरोधअनुसार काठमाण्डौ खुमलटारमा रहेको बिधिबिज्ञान प्रयोगशालामा डिएनए परिक्षण गरियो । तर साहको डिएनए बच्चासँग मिलेन् ।
१० महिनापछि बल्ल आरोपित शिक्षकले सफाई पाए । तर उनलाई फेरि समाज र पुरानै दिनचर्यामा फर्किन गाह्रो भइरहेको छ । गम्भीर आरोप लगाएर करिअरनै ध्वस्त बनाउनेमाथि कारवाहीको माग गर्दै साहका आफन्त आन्दोलनमा उत्रिए, तर कसैले सुनेन् । साह भन्छन- यस्तो संगीन आरोप लगाएर मेरो करिअर समाप्त पार्नेमाथि कारवाही हुनैपर्ने तर कसैले सुन्दैनन, मलाई नखाएको बिष लाग्यो ।’ उनी भन्छन- घटना सार्वजनिक हुँदा ५ महिनाको पेट रहेछ, म त्यो स्कुलमा पढाउन लागेकै चार महिनामात्र भएको थियो ।’
साहले सफाई पाएपछि बिराटनगरका महिला अधिकारकर्मी र सरकारी वकिलहरु तनावमा रहेको आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।